के होला र के के हुन सक्छ २०७६ मा !!! ज्योतिष शास्त्रले यसो भन्छ जनिराख्नुहोस - Experience Best News from Nepal
के होला र के के हुन सक्छ २०७६ मा !!! ज्योतिष शास्त्रले यसो भन्छ जनिराख्नुहोस
अर्को चाहिँ सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्रमा प्रवेश गरेपछि (जसलाई हामी वैशाख संक्रान्ति) भन्छौं र यी दुईको आधारबाट वार्षिक भविष्यवाणी गरिन्छ । चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन जुन बार थियो, त्यो बारको स्वामी देशको शासक हुन्छ । चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन चैत २३ गते शनिबार थियो, त्यसले गर्दा यो वर्षको राजा शनि हो । त्यसैले यो वर्षको राजा अर्थात् शासक शनि हो ।
त्यसपछि अर्को नियम हुन्छ, सूर्य ग्रह मेष राशिमा जुन अश्विनी नक्षत्रअनुसार हुन्छ, त्यो सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्रमा प्रवेश गरेको दिन कुन बार छ, त्यो बारको स्वामी त्यो वर्षको मन्त्री हुन्छ । मन्त्री अर्थात् शासकको सहयोगी एवं सल्लाहकार । सरकार चलाउने यी दुईले हो । यसपालिका मन्त्री सूर्य हुन् ।
योभन्दा पनि सूक्ष्म नियम छ । वैशाख १ गते दिउँसो १ बजेर ५२ मिनेट १५ सेकेन्डमा सूर्य अश्विनी नक्षत्रमा प्रवेश गर्छ, यो एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । ज्योतिषीको भाषामा यसलाई जगलग्न भनिन्छ । यो लग्नबाट कुन राशिकालाई के कस्तो छ त्यो पनि बताउन सकिन्छ । यसबाट देशको समग्र पक्षको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो एकदमै सूक्ष्म नियम हो, यो नियमअनुसार देश, काल र परिस्थिति हेर्न सकिन्छ । राजनीति, धनधान्य, सेयरबजार आदि कुराहरू यसैबाट हेरिन्छ । यो वर्ष वर्षादिपति मंगल ग्रह आएको छ ।
मंगल ग्रहलाई ज्योतिषमा झै–झगडा, लडाइँ तथा कलहसँग जोडिन्छ, यो ग्रह युद्धको कारक हुन्छ । मंगल नै वर्षादिपति आएकाले मानिसहरूमा कडापन, युद्ध, हत्या बढ्ने देखिन्छ । अर्कातिर मंगलले साहसिक कुरालाई पनि समेट्छ, त्यसैले प्रहरी, सेना तथा खेलकुद क्षेक्रका व्यत्तिहरूका लागि समय सहयोगी हुनेछ । मंगलको प्रभाव भुइँचालो, पहिरो आदिको सम्भावना बढी हुन्छ ।